केपी ओली र प्रचण्डलाई रिटाएर हुनुस भन्ने योगेश भट्टराईलाई खुल्ला पत्र – Fewa Times
आइसोलेसनमा मृ*त्यु भएका व्यक्तिको ४ दिनसम्म शब उठेन-आज राती हावाहुरीसहित पानी पर्ने-२५ गतेसम्म लकडाउन गर्ने सरकारको निर्णय, लकडाउन अझै कडा हुने-धनगढीमा दुबईबाट आएका व्यक्तिलाई कोरोना (भिडियो)-चीनमा फेरि हान्ता भाइरसको महामारी, एक जनाको मृ*त्यु-काठमाडौँमा १९ वर्षिया युवतीलाई कोरोनाभएको पुष्टि-आजबाट सरकारले यी ठाउँमा नुन, तेल, चामल र ग्यास बेच्ने-साथीलाई कोरोना लाग्यो भन्दै झुटो स्टाटस लेख्ने बिरगञ्जकी युवतीलाई यस्तो कडा सजाय-काभ्रेको पनौतीमा अनिश्चितकालीन कफ्र्यु-बाँस्कोटाको घरमा बम विष्फोट गराउने एक जना प्रकाउ
प्रकाशित मिति: January 4, 2018 9:15 pm
म नेकपा एमाले काठमाडौ जिल्ला कमिटी को प्रचार बिभाग सदश्य सुदर्शन बजगाईं तपाईंलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु । सर्वप्रथम काठमाडौबाट जित्दिन भनेर ताप्लेजुङमा गएर त्याहाँको एक जना सम्भावना बोकेका अमुख नेताको भविस्यमाथी खेलवाड गर्दै विजयी हुनु भएकोमा बधाई दिन चाहान्छु । पार्टीभित्र जबजको बिरोध गरेर र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको विरुद्धमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आउने काईदा घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ । तपाईंले विगत केही दिनदेखी दिनु भएको अभिब्यक्तीले मलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
केपी ओली र प्रचण्ड रिटाएर हुनुपर्छ र अक्स्फर्ड लगाएतको बिश्वबिद्धालयमा गएर पढाउनुपर्छ भन्ने तपाईंको अभिव्यक्ति मलाई पाच्य लागेन । भनिन्छ भन्न सजिलो छ तर गर्न गारो नेपाली राजनीतिमा क केपी ओली र प्रचण्डले गरेको योगदानको कुनै मूल्य छैन । तपाईंकोपनि यो देशको लागि योगदान होला तर म २७ वर्षको युवक जति उर्जा क केपी ओली र प्रचण्डमा देख्छु त्यसको १० प्रतिशतपनी तपाईंमा छैन ।
अरुलाई गाली गरेर र कस्मेटिक कुरा गरेर जनता अल्मलाउने तपाईंको काईदा ठिक लागेन मलाई । अरुको आङमा जुम्रा देख्ने र आफ्नो आङमा भएको भैंसी नदेख्ने तपाईं प्रचार बिभाग प्रमुख भएर होला तपाईंको कुरा अली बढी अतिरंजित भएको । तपाईंले केपी ओली र प्रचण्डलाई रिटाएर्ड हुन भनीरहँदा तपाईंपनि अब रिटाएर्ड हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो । तपाई प्रचार बिभाग सदश्य हुनुन्छ म नेकपा एमाले काठमाडौ जिल्ला कमिटीको प्रचार बिभाग सदश्य र युवा संघ काठमाडौको प्रचार बिभाग प्रमुखको रुपमा काम गरीरहेको छु । २५ वर्षको उमेरमा नेपाल सरकारले दिने युवा प्रतिभा पुरस्कारबाट सम्मानित भईसकेको म अहिले दर्जनौं संघ संस्थाको सल्लाहकार छु र जस्तोसुकै काम निर्वाह गर्न सक्छु । प्रचारको कुरामा तपईभन्दा म अब्बल छु किनकी सत्य कुरा गर्दा म २ वटा अनलाइन एकैसाथ एउटै मिडिया कम्पनीबाट संचालन गर्छु र अफुलाई पुग्ने त्यहीबाट कमाउन सक्छु । मैले यसो भनीरहँद धेरैलाई सुदर्शन बजगाईंले मफाई गर्‍यो भन्नेपनी लाग्न सक्छ ।
आज क। योगेश भट्टराईको अन्तरवार्ता सुनेर लेख्न मन लागेर केही कुरा प्रष्ट पार्न लेख्दै छु । केपी ओली र प्रचण्ड बूढो भयो भन्ने तपाईंले पहिला अफु सन्यास लिनु भएको भए राम्रो हुन्थियो । म घमण्डका साथ भन्न सक्छु तपाईं भन्दा प्रचारको काम उत्कृष्ट धंगले गर्न सक्छु र सचिवको काम ब्यवस्थित ढंगबाट गर्ने क्षमता म मा छ र सांगठनिक जिवनमा मैले धेरै तपाईंभन्दा यो पार्टीलाई हाँक्न सक्ने ब्यक्ती देखेको छु । यति लामो समय पार्टीमा लागेर केही जनताले देख्ने र आभास गर्ने खालको केही गर्न नसक्ने तपाईंले पार्टी हाँक्छु र नेतृत्व गर्छु भन्दा मलाई त्यो कुरा पाच्य भएन ।
तपाईजस्ता हजारौं क्षमतावान ब्यक्ती पार्टीमा छन् जसले तपाईंको भन्दा बढी योगदान दिएका छन्, जो पर्दा अगाडि देखीएनन । तपाईंले पुस्तान्तरणको कुरा गरि रहँदा म पनि रिटाएर्ड हुन्छु र केपी ओली प्रचण्डलाई भन्छु भनेको भए ठिकै हुन्थियो । अरुलाई चर्चामा आउनकोलागी त्यसो भनीरहँदा तपाई भन्दा युवा साथीहरु अवसरको खोजीमा रहेको र क्षमता भएको ब्यक्ती पछीपरेको आभास तपाईंलाई भएन जस्तो लागेर यो पत्र लेख्न बाध्य भए । मलाई लाग्छ देशलाई समृद्धिको बाटोमा लान सक्ने ओली प्रचण्ड होईन कोईलीको जस्तो मीठो कुरा गर्ने र काम भने कागको गुणमा अण्डा पार्ने तपाईं जस्तो कोईलीको स्वभाव भएका नेताले रिटाएरमेन्ट लिनुपर्छ ।
गुटको राजनीति गर्ने र चर्चामा आउन जे पनि भन्ने तपाई र धनश्याम भुषाल जस्ता ब्यक्तीले राजिनामा दिएर रिटाएर भए मात्र म अनि म जस्ता सयौं युवाले अवसर पाउनेछन् । केपी ओलीलाइ रिटाएर हुनुस भनीरहँदा ४०–५० वर्ष को हदबन्दी तोकेर राजनितीलाई सहि बाटोमा लाने ताकत तपाईंसंग छ, म प्रस्न गर्न चाहान्छु । तपाईंसंग त्यो सामर्थ्यता छ भने अरुको सन्यास माग्नुस होईन भने आफ्नो अभिब्यक्ती समालेर अघि बढ्नुहुन अनुरोध गर्दछु । बुढा मानिसको पनि युवा सोच हुन्छ । केपी ओली र प्रचण्डको सोचले देशमा वाम गठबन्धनको अत्याधिक मत आएको हो ।
नेताको बिरोध गरेर चर्चित हुन खोज्ने तपाई जस्ता नेताले यो पार्टी हाँक्न सक्नु हुन्न । त्यसैले अबदेखी अफ्नो अभिब्यक्ती सुधार्नुहुन अनुरोध गर्दछु । केपी ओली र प्रचण्डमा भएको क्षमताको १० प्रतिशतपनी तपाईमा छैन जुन भन्दा बढी एमाले माओवादी केन्द्रका हजारौं कार्यकर्तामा छ त्यसैले अब तपाईं रिटाएर्ड हुनुपर्छ र ती अवसरको खोजीमा रहेका युवालाई दिनुपर्छ ।मौका पाएभने हिरा फोर्न जान्ने र संभावनाका भकारी फुटाउनसक्ने हजारौं युवा वाम गठबन्धनमा छन् । त्यसैले अब बढी गफ गर्ने तपाईंले सन्यास लिनु पर्छ केपी ओली प्रचण्डले त यो देशलाई समृद्धि र समुन्नतिको बाटोमा लानु छ र सुखी नेपानी र सम्वृद नेपालको सपना साकार पार्नुछ ।
रिसानी माफ पाउँ
उहीँ तपाईंको शुभचिन्तक !
प्रचार बिभाग सदश्य,नेकपा एमाले काठमाडौ जिल्ला कमिटी
माहामारीको अबस्था र बिरोध
झिगुखोला करिडोर : पाँचखाल गौरबको अर्को आयोजना
बीस लाखमै ट्रयाक खुल्छ : यसरी पुग्नेछ दोलालघाट जेटबोट !
सहुलियत कर्जा सम्बन्धि छलफल उपलब्धिमुलक : माधव ढुंगेल
आइसोलेसनमा मृ*त्यु भएका व्यक्तिको ४ दिनसम्म शब उठेन
चैत्र २०, बुटवल – बुटवलस्थित कोरोना आइसोलेसन अस्पतालमा उपचार क्रममा आइतबार मृत्यु भएका सैनामैनाका......
१० रुपैयाँका दरले घट्यो डिजेल, पेट्रोल मुल्य, नयाँ मुल्य कति ? थाहा पाउनुहोस्
चैत्र २०, काठमाडौँ – नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ह्वात्तै घटाएको छ । निगमका अनुसार पेट्रोल,......